I-Iron Iron Pot, i-Cast Iron Cookware, i-Iron Iron i-Pot Pot - iSANXIA
I-SANXIA yasekwa ngo-1998 lishishini lobuchule lokuvelisa elidibanisa i-R & D ezimeleyo, uyilo lwamashishini, ukuvelisa ukungunda, imveliso yemveliso, ulawulo lomgangatho kunye nentengiso yezinto zokupheka. Inendawo yokugcina ephezulu yentsimbi yokupheka yentsimbi kwaye ikwangoyena shishino lukhulu emhlabeni.
Impilo kunye nomsi oyile omncinci wokucoceka okuphezulu kwesinyithi ...
Isiciko sepani yensimbi yokuqhekeza inokusetyenziswa njenge ...
Intsimbi kabini indlebe yentsimbi yentsimbi eyahlula i-germ ...
I-oveni esempilweni yaseDatshi inokupheka okugqwesileyo ...
Phosa intsimbi yokucoca ngesiphatho esinye somthi ...
Ubisi Pot Pot Cast Iron wayesebenzisa Casserole Non-Stick F ...
I-Sanxia yenye yezona ndawo zinkulu zokubumba ikhitshi e-Asia kunye nomenzi omkhulu we-ironware ekhitshini emhlabeni. Ithathe inxaxheba ekwenziweni komgangatho weemveliso zensimbi yensimbi yase China.
Ngo-2019, iSanxia iphumelele indawo yokuqala kumashishini alishumi aphezulu kumzi-mveliso wokukhanya wase-China.
I-Sanxia ithatha uyilo lweshishini njengenxalenye ekhokelayo, ngokuqhubekayo iphucula ukusebenza okusebenzayo kunye nenqanaba lobuhle beemveliso, kwaye inamalungelo awodwa omenzi wechiza ngaphezulu kwama-40 kunye nembonakalo yamalungelo abenzi.
Nge "imbiza yesinyithi yokuphosa amatye" e-Sanxia, ​​inkampani yaphumelela i-Red Red Dot Design Award ngo-2020. Makhe ihlabathi libone umsebenzi wangaphakathi woyilo loyilo lwe-Sanxia.
Ngendlela efanelekileyo yokulawula umgangatho, iimveliso ziphumelele ukuvavanywa kobugcisa be-FDA kunye ne-LFGB.
I-Sanxia ineziko lokuvavanywa kweelebhu zesikwere seemitha ezingama-2000, ngo-2020, yanikezelwa ukuqinisekiswa kweKomiti yokuVunywa kweSizwe yase China yovavanyo lokuhambelana (CNAS).
uNamel Skillet, ebizwa ngokuba yiCast Iron Skillets, I-Iron Iron Skillet, xtreme Iron Skillet, i-Cast yentsimbi enqabileyo, Isinyithi se Iron Iron,